समचार Archives - Page 97 of 116 - Saptakoshionline
प्रदेश नम्वर १को अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण
इटहरी । सुरक्षित घर बाँस सबैलाई खेती योग्य जमिन जो ताहा किशान लाई भन्ने नाराका साथ सुनसरीको इटहरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागिहरुले मोही हक दावी गर्ने समय बढाउनु पर्ने माग गरेका छन । राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्चले आयोजना गरेको प्रदेश नम्वर १का अगुवा कार्यकर्ताको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दैे बक्ताहरुले दर्तावाला मोहीहरुले विभिन्न कारणले तोकिएको समयमा मोहीयानी हक दावी गर्न नसकेको भन्दै छ मह...
बक्सर मेवेदरले अन्तिम फाइट पनि जिते
भाद्र । अमेरिकी बक्सर फ्लड मेवेदरले कोनोर म्याक्ग्रेगोरलाई १० औं राउन्डमा नकआउट गर्दै आइतबार करिअरको अन्तिम फाइट जितेका छन् । ५० औं जितसँगै उनले व्यावसायिक बक्सिङ करिअरलाई अपराजित रुपमा टुंग्याए । ‘मनी मेकर’को रुपमा प्रख्यात मेवेदर हेभिवेट च्याम्पियन हुन् । आयरल्यान्डका म्याक्ग्रेगरको भने बक्सिङमा यो नै पहिलो खेल हो । उनी युएफसी (अल्टिमेट माइटिङ च्याम्पियनसिप०का राजकुमार मानिन्छन् । त्यसैले मेव...
इटहरीका सञ्चारकर्मीसँग काउन्सिलको छलफल
सोमबार १२ भाद्र प्रेश काउन्सिल नेपालको टोलीले गत श्रावण २७ गते आएको बाढीले सञ्चारक्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिबारे इटहरीका सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा सञ्चारकर्मीले बिपदको बेला सञ्चार माध्यमहरु शसक्त हुनुपर्ने बेलामा बिद्युत अवरोध, टेलिफोनमा अवरोध हुँदा समाचार सम्प्रेषणमा असहज भएको भन्दै त्यस्तो बेलामा सञ्चारकर्मीलाई सञ्चारग्राम जस्तो सुबिधा सम्पन्न ठाउँ आवश्यक पर्ने बताएका थिए। ...
रक्षकनै भक्षक भए पछी गाउँलेलेनै ईलाका घेरे असैई बस्नेतकाे धम्की पथरीशनिश्चरेमा खाेई शान्ती ?
पथरी । माेरङकाे पथरी शनिश्चरे वडा नं. १० मा दिनहु प्रहरी द्घारा ज्याजदी हुँदै अाएकाे छ । जनताकाे सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी द्घारा दिनहु गाउँका युवाहरु कुटपिट हुन थालेपछी गाउँ त्रासित बनेकाे छ । गाँउमा हावा खान निस्केका युवा हरुलाई मदिरा सेवन गरेका नेपाल प्रहरीका असई हरी बस्नेत द्घारा संबेदनसिल अंगमा हातपात गरेपछी स्थानीयहरु अाक्राेसीत हुँदै ईलाका प्रहरी कार्यलय पथरीमा न्याय खाेज्न राति ११ बजे भ...
वाढिपछि सुनसरीमा सर्पदशंका विरामीहरुको संख्या बढ्दै
इटहरी । हरेक वर्ष झै यस वर्ष पनि वर्षायामको समयमा पुर्वी तराईमा सर्पदशंको उपचार हुने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सर्पदशंका विरामीहरुको चाप उल्लेखिय रहेको छ । वर्षायाममा जमिनमुनी वस्ने सर्पको वासस्थानमा पानी जम्मे भएको कारण सर्प बाहीर आउने भएका कारण अन्य समयको तुलनामा वर्षायाममा सर्पदशंका विरामीहरुको संख्या वढी हुने गरेको हो । साउनको अन्तिम साताको वाढिपछि सुनसरीमा सर्पदशंका विरामीहरुको संख्या उल्लेखिय र...
रोल्पा । गाउँमै गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा दिने उदेश्यले ६ बर्षअघि स्वास्थ चौकी भवन निर्माणको जिम्मा पाएका रोल्पाका ठेकेदार अमरसिंह पुन २०७० सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सांसद बने । तत्कालिन ठेकेदार पुन हाल सिचाई राज्यमन्त्री भएका छन् । तर उनले जिम्मा लिएको स्वास्थ्य चौकीको भवन अझै बन्न सकेको छैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय रोल्पाका लेखा अधिकृत भगबहादुर दशौदीका अनुसार...
तरुण दलले डुवान पिडितलाई राहत वितरण
इटहरी । नेपाल तरुण दलको एक तरुण एक राहत कार्यक्रम अन्र्तगत तरुण दल सुनसरीले पाँचौ दिनको कार्यक्रममा इटहरी ५को तुलसा टोलका डुवान पिडितहरुलाई राहत वितरण गरेको छ । डुवानका कारण गाँस वास विहिन वन्न पुगेका तुलसा टोलका २९ परिवारलाई तरुण दल सुनसरीले त्रिपाल र चालम उपलव्ध गराएको हो । अन्य निकायहरु खोला किनाराका बाढि पिडितहरुलाई राहत बाड्न केन्द्रीत रहेको समयमा डुवानका कारण पिडित बनेकाहरुको पिडामा मल्हम ल...
नेवारी कला संस्कृतीको जर्गेना गर्दै इटहरीका नेवार समुदाय
इटहरी । पुर्वी नेपालमा पनि नेवारी कला संस्कृतीको जर्गेना गर्ने उदेश्यले सञ्चालन गरिएको धिमे बाजा र नेवारी नृत्य प्रशिक्षणको एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी समापन गरेको छ । एक महिना देखि इटहरीमा सञ्चालन भई रहेको धिमे बाजार र नेवारी नृत्य प्रशिक्षण लिएका कलाकारहरुको प्रस्तुति सहित समापन गरिएको हो । समापन कार्यक्रममा कलाकारहरुले कुमारी चर्या , मारुनी , कुमारी लगायतका नृत्य तथा धिमे बाजा बजाएर प्र...
यायोक्खाले सानुमाया बचाउने लाई सम्मान तथा राहात वितरण
इटहरी । साउन २७ गते रातीे वुढी खोलामा आएको बाढिले बगाएकी इटहरी ४ गैरी गाउँकी सानुमाया राईलाई १० किलो मिटर परबाट जिवीत उद्धार गर्ने दुई युवालाई किराँत राई यायोक्खाले सम्मान गरेको छ । मध्यरातमा आएको बाढिले सुतिरहेको समयमा घरवार सहित बगाएकी सानुमायालाई मोरगंको बुढीगंगा गाँउपालिका ५ स्थीत डिपु टोल नजिकबाट स्थानीय युवा अनिल ऋषिदेव र विरु ऋषिदेवले जिवीतै निकालेर स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याएका थिए । सानुमा...
लालीगँुरास टोलका वाढिपिडित लाई राहत तथा नगद
मोरगं । मोरङगको सुन्दरहरैचा नगरपालीका स्थीत लालीगँुरास टोलका वाढिपिडितहरुलाई राहत वितरण गरीएको छ । सुन्दरहरैचा ४ सिर्जनसिल प्रावीमा कपन काठमाण्डौका व्यवसायीहरुको सहयोगमा २६३ घर परिवारलाई नेपाल तरुणदल नगरसमिति सुन्दरहरैचाको सहकार्यमा डसना तथा वच्चाहरुका लागी टिसर्ट वितरण गरीएको छ । हामीले मिडिया, फेसवुक मार्फत यहाँको वाढिपिडितहरुको दयनिय अवस्था सुनेर कपनका व्यवसायी र विदेशमा रहेका साथिभाई संग समन्...